Kioba: fampiatoana amin’ny asa 500.000 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2010 6:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, македонски, 日本語, English
Mirona mankamin'ny fibabohan'i Fidel Castro (izay nialana bàla nony avy eo) fa tsy miasa intsony ny modely ekonomikan'i Kioba, dia nanambara ny governemanta [ES] fa mikasa ny hampiato mpiasa maro ao amin'ny asam-panjakana, izany dia ezaka mba hanomezana aina kely ho an'ny ekonomian'ny firenena.
The Cuban Triangle dia mitatitra ireo vaovao:
Tsy dia misy dikany loatra ilay lohateny: ‘Fanambaran'ny Foiben'ny Trabajadores ao Kioba.’
Goavana ny vaovao: fandroahana 500,000 hatramin'ny volana May ho avy izao, ‘mifanindran-dàlana amin'ny fiakaran'ny any amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana.’
Raha tanteraka hatramin'ny farany izany, hahazo tombony aamin'ny firoboroboan'ireo sehatra tsy miankina maro ireo fianakaviana Kiobana an'arivony ary hanome vintana an'ireo Amerikana manana fihaviana Kiobana ho afaka manampy ireo havany voatery hiasa tena amin'ny alalan'ny fandefasam-bola ho azy
Somary mibetroka kosa i El Cafe Cubano :
i Kioba kaomionista dia nanambara fa hanafoana asam-panjakana iray tapitrisa ary VINAVINAINA handrisika ny fandraharahana madinika. Manontany tena aho raha misy ifandraisany amin'ny TSY FAHOMBIAZANA TANTERAKY ny jadona Kiobana izany? Atsy ho atsy dia handre isika fa hoe an'ireo gaigy natao sesintany na ireo fahirano natao ny hadisoana.
Manontany tena fotsiny aho raha ny sasany amin'ireto asam-panjakana ireto no hotapahana :
-Ireo mpiambina fonja izay hitanana ireo gadra politika ve?
-Fikojakojana ny fokon'ny castro rehetra? (ahafahana mitsitsy vola an-tapitrisany ity!
Havana Times dia mitanisa ny Cuban Workers Federation (CTC), izay mamaritra izany fepetra izany ho “tetikasa “hanatsarana” ny modely ekonomika Kiobana sy tetikasan'ny ekonomia ho an'ny vanim-potoanan'ny 2011-2015″, ary manampy:
Rehefa mitatitra ireo fandroahana any amin'ireo firenena kapitalista ny media Kiobana eo ambany fahefan'ny governemanta dia zatra ery izy ireo mamaritra izany ho fepetra tsy mifaditrovana mba hahazoana tombony amin'ny tontolon'ny fandraharahana tahaka ny fanehoana ny tsy fahaizana mikaroka hevitra hiantohana ny fampiasana ho an'ireo mpiasa rehetra.
Ankehitriny, ny fanolorana ity tetikasa fandroahana faobe ity any anatin'ireo gazety ao an-toerana dia lazaina ho zavatra tsara ho an'ny rafitra sosialistan'ny firenena nolemen'ny fivangongoan'ny mpiasa any amin'ny sehatra lehiben'ny Fanjakana.
Ireo izay tsy liana amin'izany dia manana ny safidy, na hiasa tena na hiditra any amin'ireo sehatra hafa tsy miankina tahaka ny kaoperativa. Mbola tsy nambara ny antsipirihany mikasika ny famelana hiasa tena sy hiditra any amina kaoperativa.
El Yuma dia mandinika raha izany fotsiny ihany no nentin'ireo fepetra ireo – ny fiverenan'ny asa-tena any Kioba, ary ny The Cuban Triangle, tanatina lahatsoratra tany aloha tany dia nanao lisitra ireo fanamarihana mivaivay sasany:
- Manaitra ilay isa 500,000 – mampieritreritra ny sarin'ireo mpiasa Kiobana 500,000 mody an-trano miaraka amin'ny taratasy fandroahana, tsy mahalala ny haleha ny maraina manaraka an'izay, sy ny filan'ny ekonomia mamorona asa 500,000 vaovao tampoka eo.
- Asa-tena, na trabajo por cuenta propia, dia loharano hafa ho amin'ny asa vaovao. Maro no mety handray an-karavoana ny fanomezan-dàlana hiasa mba hitsaharan'izy ireo amin'ny fanaovana asa miafina. An'arivony ireo Kiobana ao anatin'io sokajy io…
- Ireo Kiobana dia miantso ny governemanta hamadika ireo orinasa madinika an'ny fanjakana ho kaoperativa any an-tanàn-dehibe ; ny kaoperativa mantsy, dia endrika fananana iray neken'i Kioba efa an-taonany maro izao tany ambanivohitra tany. Hahaliana ny mijery izany. Tsotra ilay fiovam-penitra, saingy ny fahazoana tombony dia miankina amin'ireo mpiasa sy ny lalàna mifehy azy ireo amin'ny asany.
- Teo aloha teo dia nanara-maso mikasika ny cuentapropistas [Avy amin'ny mpandika: mpiasa tena] ao Kioba aho, ary nahita fa ireo orinasa mampiasa ny pesos dia mahazo telo avo heny noho ny karama salantsalany any amin'ny fanjakana. Eto koa, mbola ny lalàna no mamaritra…
Havana Times dia mamintina ny zava-misy amin'ity fomba ity:
Nahatonga ahiahy vaovao ny fahaverezan'asa mananontanona any Kioba, tsy izany irery fa nahatonga koa fanombatombanana, fanantenana sy fanontaniana mikasika ny fivelaran'ireo orinasa tsy miankina, satria ny rafitra vaovaon'ny hetra sy ny antoka ho fandehanan'ity rafitra vaovao ity dia tsy mbola nampahafantarina ny besinimaro.
Ny sary famantarana nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, “apetraho eo ambony latabatra ny volanao…”, dia an'i jon smith ‘una nos lucror’, nampiasàna ny Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic license. Tsidiho ny sarin'i jon smith ‘una nos lucror”ao amin'ny flickr.